Ahoana ny fanovana ny fitaovana Apple matoky anao | Vaovao IPhone
Ny fanamarinana dingana roa an'ny Apple dia safidy fiarovana izay tokony ho nomen'ny mpampiasa rehetra. Amin'ity fomba ity dia azonao antoka fa fitaovana vaovao ihany no azo ampidirina ao amin'ny kaontinao, na miditra sy manova ny angon-drakitra avy aminy amin'ny alàlan'ny fanomezan-dàlana izany fidirana amin'ny iray amin'ireo fitaovana nofinidinay ho "Fitaovana azo antoka". Saingy miova ny fitaovantsika, mividy vaovao isika, mivarotra taloha… ary midika izany fa mety tsy ho izany intsony ny fitaovana atokisana. Azavainay eto ambany ny fomba ahafahanay manova io lisitry ny fitaovana io mba hanavaozana azy hatrany.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny fidirana amin'ny kaonty Apple antsika, noho izany dia mankany amin'ny pejy isika https://appleid.apple.com ary kitiho ny "Tantano ny Apple ID". Ampidirintsika ny angon-drakitra fidirantsika ary rehefa voahodina ny fanamarinana dingana roa dia tsy maintsy ampidirintsika ny kaody izay halefa amintsika amin'ny iray amin'ireo fitaovana atokisantsika.
Raha vao tafiditra ao amin'ny kaontintsika dia tsy maintsy safidio eo amin'ny menio ankavia ny safidy «Teny miafina sy fiarovana» ​​ary avy eo mifidiana ny safidy «Manampy na esory ireo fitaovana azo antoka».
Ity menio ity no hisehoan'ireo fitaovana rehetra mifandraika amin'ny kaonty iCloud anao. Mety mahita fitaovana tsy anao intsony ianao ka tsy tokony ho ao anaty lisitra. Amin'ny fipihana ny «Delete» dia hanjavona ho azy izy io ary tsy ho fitaovana afaka manome alalana ny fanovana ny kaontinao intsony. Mety hahita fitaovana miandry ianao hamarinina mba ho anisan'ireo fitaovana atokisanao. Amin'ny fipihana ny «Hamarino» kaody iray no halefa ao amin'io fitaovana io fa raha ampidirinao io dia efa tafiditra ao anatin'ny lisitrao.
Zava-dehibe ny fanananao nomeraon-telefaona iray (na maromaro) ho fitaovana matoky anao. Io no fomba tokana manome toky anao ny fomba hidirana amin'ny kaontinao raha sanatria ka very ny fitaovana rehetra anananao. Afaka mangataka dika mitovy amin'ny SIM-nao foana ianao ary mahazo ny hafatra any hiditra amin'ny kaontinao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » iCloud » Ahoana ny fanovana ireo fitaovana Apple natokanao
Araho ny vanim-potoana NBA vaovao miaraka amin'ny fampiharana ofisialy
Sintomy ny sary mivoaka amin'ny fanambarana Apple Watch vaovao